प्रतिकार | Himal Times
Home सिर्जना प्रतिकार
लघुकथा : प्रतिकार
“चेलीहरू हो ! गर्नसम्म गरेछौँ । कानुनको मुखमै कालोमोसो दलेछौ । तिमीहरूलाई इज्जत नदिऊँ भने आफ्नो भुल स्वीकारेर कानुनको शरणमा आएका छौ । अर्कातिर आफ्नै विभागको धज्जी उडाउने काम गरेका छौ ।” हवल्दार आँखा मिच्दै थपिन् , “अरू हाकिमहरू अन्तै जानुभएको छ । यो थाना उहाँकै नेतृत्वमा थियो । उहाँ पछिको वरिष्ठ वरियाताक्रममा म नै पर्छु । अब म कसो गरूँ ?”
हत्त न पत्त चाँचरी अघि सरी, “केही गर्न पर्दैन, दिज्यू ! दुई संदिग्ध अभियुक्तहरू घटना घटायौँ भनेर थानाको शरणमा आए । प्रारम्भिक जाँचपडताल गर्दा घटना घटेकै भेटियो । लास र अभियुक्त दुबै थरीलाई सदरमुकाम चलान गरियो । यस्तै सोच्नुस् र यस्तै गर्नुस् ।” धनियाले थपी, “हैन, हैन । नियमले जे भन्छ त्यही गर्नुस् तर हामीलाई अरू राक्षसहरूको गिद्धेनजरबाट जोगाउनुस् ।”
“कुरा मात्र गर्ने कि लास पनि नियन्त्रणमा लिने भन्या ।” चाँचरी भन्दै गई, “हामी वाध्यतामा परेकाले मात्रै जघन्य अपराधिक घटना घट्यो । नारी इज्जत ज्यानभन्दा प्यारो हुँदो रहेछ । नहुनुपर्ने कुरा भइगयो । अब सजायको विकल्प रहेन ।”
हवल्दार उठिन् । नजिकैको बोतलको आधा पानी निखारिन् । र, गला सफा गर्दै चाँचरी र धनियातिर हेर्दै भन्न थालिन्, “तिमेर्का कुरा खस्न नपाउँदै हाम्रा स्टाफहरू घटनास्थलतर्फ दौडिए । सबैतिर खबर भयो । त्यसको चिन्ता नलेओ । मलाई यत्ति भन त, सतित्व जोगाउन हत्या मात्र निर्विकल्प उपाय हो, त ?”
रातीपिरी हुँदै चाँचरी कड्की, “हामीले तपाईं हरूको सईलाई हत्या गरेको हैन । हामीलाई झुक्याएर नशा खुवायो । जङ्गल पु¥यायो र बलात्कार गर्ने दुष्प्रयास ग¥यो । हामीले घोचै घोचाले हानेर ठहरै पा¥यौँ ।” धनियाले थपी, “हबल्दार साहब ! हाम्रो प्रतिकारको परिणामस्वरूप ऊ म¥यो । त्यसैले यसलाई हत्या हैन, प्रतिकार भन्नुस्, प्रतिकार !”
हबल्दारको मुखबाट पनि मधुरो आवाज निस्कियो, “प्रतिकार !”
Previous articleनेकपा त्रिवेणी द्धारा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विरोध प्रदर्शन
Next articleबेलायतमा पुनः देशव्यापी लकडाउन